Maitiro ekuita bhizinesi rako kuburikidza neeputari naSemalt?
Munguva yekukura kusingakanganwike kweInternet uye simba rayo rinowedzera, kuvapo kwebhizinesi rinodhura uye rakabudirira harifungiki pasina kuumba yako webhusaiti. Nekudaro, saiti haifanire kungogadzirwa asi zvakare kushanda nemazvo uye kuwanikwe zviri nyore nevatengi uye nevanokwikwidza kuburikidza nebrowser. SEO ye webhusaiti inokurega iwe kuti utore kambani yako kunze kwedambudziko uye inokwezva chitsva chevatengi.
Kukwikwidza kwekutsvaga kushambadzira kunosisira kunosanganisira mukati memukati SEO, kunze kwekunze zviwanikwa, uye SERM, zvinoreva kushanda nemukurumbira wekambani paInternet. Kuitwa kwekuita basa kwambotaurwa kuchabatsira kukwezva vatengi, vashandi, kana vatengi; kuvandudza mukurumbira wekambani pakati pekutsvaga mhinduro; kuwedzera huwandu wemirairo zvinhu kana masevhisi; kuwedzera kuvimba kwevanotarisana nevateereri; chengetedza yakakwira brand kusvika.
Saka, nzvimbo yacho haingori traffic chete asi inotangawo kushanda nevashanyi zvakanyanya mushe.
Nei uchisarudza Semalt?
Kune mushandisi, iyo yekutanga nguva yakatarisana ne SEO-kusimudzirwa kwemasiti, zvakaoma kusarudza pakati peakawanda SEO mikana iyo inopihwa. Kana mamirioni emakwikwi epamhepo ekushamwaridzana anokwanisa kudzivirira yako saiti kuwana yepamusoro yeGoogle chinzvimbo, kana saiti traffic ichiri yakaderera, kunyangwe paine nhamba yakakwana yevanogona kuve vatengi, Semalt anozokomberedza bhizinesi rako kusvika padanho rinotevera.
Tsvaga Semalt seyenyanzvi yekushambadzira uye Yekutsvaga Injini Yekuita sevhisi, iyo ichave imwe yezvishandiso zvinobudirira zvekukudziridza kwako kwepamhepo sosi. Iyo yekusimudzira system inoshandiswa nekambani yedu ndeyese uye yakakodzera kunenge marudzi ese emabhizinesi epamhepo. Semalt yekutsvagisa injini yekushandisa ichakubvumidza iwe kuti ugadzire kutenderera kuyerera kwevashandisi veInternet vanoendeswa kunzvimbo ino. Izvi zvinodaro nekuti kufambira mberi kunogona kuwanikwa kuburikidza nekufambiswa hakunyangarika, uye saka webhusaiti ichaenderera mberi nekuwana traffic nyangwe mushure mekuzadziswa kwakazara kweiyo SEO zvakaitwa.
Semalt ichakubatsira iwe kuwana iyo huru traffic traffic inowanikwa paInternet. Sezvo inove hafu yevose vashanyi vesaiti vanouya kubva kune yekutsvaga injini.
Kutenda Semalt, iwe unokwezva vashanyi vanofarira, vanouya kune webhusaiti kubva kune injini yekutsvaga yekutsvaga iwe, masevhisi ako, zvigadzirwa, kana ruzivo.
Izvo zvakakoshawo kufunga kuti yekutsvaga traffic ndeyemahara! Iwe haufanire kubhadhara kune Clicks kana kubatanidza kune yako webhusaiti kubva pane yekutsvaga peji peji.
Kana iwe uchinetseka kuti kuitira kuitisa zvemhando yepamusoro optimization, boka rese revanyanzvi uye anopfuura mwedzi mumwe webasa anodikanwa, isu tinodzinga kusahadzika kwako. Nyanzvi zvedu dzinozoisa mupfungwa nezvido zvako uye kupedzisa basa nekukurumidza. Uye zvakare, iko kudikanwa kwekugara uchigadzirisa data pane saiti uye kuwedzera uremu hwechibvumirano zvakare inotorwa mukufungwa.
Kune vashandisi vane iyo kambani isingakwanise yakazvimirira kusarudza kumberi kwebasa rekushambadzira kwekutsvaga kubva pane yavo yekushambadzira nzira, Semalt ichabatsira nekusarudzwa kwenzvimbo dzekutanga. Izvi zvinotarisa pane kuedza kweSEO-nyanzvi uye vatengesi pane rimwe basa uye kuwana rakanyanya kubudirira.
Semalt ichakubatsira iwe ne:
Ngatisimukirei kurukurirano yakadzama yemabasa ayo iwe aunogona kuwana naSemalt.
Nekutarisa kwako kutarisa kune yakakwirira mhando mune zvese zvese webhusaiti, iwe unogona kukanganwa kuona kwekushanda kwayo chaiko. Kune vanotanga mundima yekutsvaga optimization, tinosimudza mushandirapamwe weAlsSEO, uyo unoratidza zvakanakisa nguva pfupi pfupi.
Iwe unogona kushandisa basa iri kusimudzira ako mapurojekiti kana kugadzirisa basa revatengi. Nekudaro, zvisinei nezvezvido zvega zvevatengi, AutoSEO inopa yakakwirira-mhando peji peji. Zvichibva pashoko rakakosha kutsvakisisa uye webhu analytics zvirevo, mushandirapamwe uyu achakubatsira iwe kuvandudza webhusaiti kuwoneka uye kuvaka zvinongedzo.
Panguva imwecheteyo, iri iro basa rine mazwi akakosha zvakanyanya SEO. Keyword kuronga kunobatsira iwe kusarudza chaizvo mitsara, ayo akanakisa kune yako saiti.
Iyo inopa ichave inonyanya kubatsira kune webmasters, freelancers, vashoma varidzi emabhizinesi, uye kutanga.
Wakatsanangura zvakajeka izvo zvaunokoshesa uye nechinangwa chekukura kwekutengesa, purofiti uye kubatana kunobatsira? Ipapo FullSEO yakanakira iwe. Izvo zvinosanganisira kuvandudza pamwe nekushandisa kwevatengi-yakarongeka chirongwa cheSEO nekusimudzira paNet. Kutarisa kune ruzivo uye kunzwisisa kweiyo chaiyo yakasarudzika yevatengi zviwanikwa zvinokutendera iwe kuvandudza inonyanya kushanda webhu kusimudzira webhusaiti.
Inofarira yako masevhisi kana zvigadzirwa vatengi vachazotungamirwa kunowanikwa kune yako saiti, iyo, ipapo, ichave iri pedyo zvikuru nepamusoro injini yekutsvaga.
Mabasa makuru emushandirapamwe uyu ndean:
FullSEO inonyanya kushanda kune bhizinesi mufambiro uye zvemagetsi zvemabhizimusi. Nekudaro, kutarisa pane chaiyo mutengi kunoita kuti mushandirapamwe uyu uwane mari yekutanga, mabhizinesi akazvimirira anoda kushandisa yavo webhusaiti kusvika pakakwirira.
Hapana munhu anofarira kutsanangudza mukutsanangurwa kwakakura uye kwakaomarara kwezvinhu, masevhisi, makambani. Ingotaridza vatengi vako zvaunogona kuita uchishandisa Anotsanangura vhidhiyo yakagadzirwa naSemalt nyanzvi. Ingorondedzera pfungwa yako mumashoko mashoma, uye isu tichakubatsira iwe kugadzira iyo firimu-reel iyo inoratidza maitiro ekugadzira, nheyo dzekambani inomiririra kunaka kwemasevhisi aunopa uye chigadzirwa chaunogadzira. Kuendeswa kwemashoko mune midhiya fomu kunonyatso gonesa maitiro ayo uye kuita kuti vatengi vagovane zvavanenge vaona nevamwe.
Chikwata cheSemalt chinotora mukusimudzira kwepfungwa, kunyora script, kuongorora kugadzirwa kwevhidhiyo, inyanzvi kusimbisa, uye kugadzirisa.
Iyi sevhisi inonyanya kukosha kune varidzi vemabhizinesi madiki, kutanga, uye makambani anoda kufarira vateereri vavariro yavo.
Chidzidzo chekutanga chedatha uye ruzivo ndiyo kiyi yekubudirira mune chero bhizinesi. Wongorora zvinodiwa nevatengi uye uvape chaizvo zvavanoda. Chengetedza uone kufambira mberi uye mashandiro ekambani inokwikwidza, sarudza chakavanzika chekubudirira kwayo, uye ita ongororo yakawanikwa. Yedu Web Analytics inokuzivisa iwe zvese nezvekushanda uye kushanda kwewebsite yako.
Iyo system ichapa:
mabasa ekutarisa ako Internet masaiti masosi,
Kutsvaga mawebhutu emakwikwi,
kuzivisa mapeji ekuenzanisa zvikanganiso,
kugamuchira zvese-zvinosanganisira webhu mishumo mishumo
kuwedzera kuwoneka kwewebhu pawebhu.
Chero chero mushandisi anogona kugadzira chinhu chakanaka cheWebhusaiti analytics nekuti ruzivo ndicho chishandiso chakasimba kwazvo mumaoko ako.
Kana iyo kusikwa kwewebhu saiti kuchikuita kunge kusiri kunetsa kupfuura kukurudzira kwayo, Semalt achabatsira nebasa iri! Sevanyanzvi mumunda wedu, tichagadzira webhusaiti iyo yakakunakira iwe. Kunyangwe chiri muchitoro chepamhepo, cheimba yakazvimiririra art, kambani hombe, kana bhizinesi revanhu- nyanzvi dzako dzinogadzira chigadzirwa chakanakisa chinosangana nezvose zvinodiwa uye zvido zvemutengi.
Oriental kune iyo Internet nzvimbo nhasi inoshandura webhusaiti kune bhizinesi kadhi rekambani, iyo kumeso kwayo. Ndokusaka zvichikosha kuti utarise kwete chete pakutsvagisa injini yekuwanikwa kwewebsite zviwanikwa asiwo pakugadzira peji inoyevedza yakagadzirwa. Isu tinochengetawo yakakwirira yehuwandu yedziviriro yedata panguva yekuvandudzwa kwewebsite. Mushure mekutanga kwebasa rayo, iyo ruzivo ichave inowanzo kuunganidzwa, kuitiswa, uye kupihwa nenzira yemishumo. Saka, iwe unokwanisa kudzora mashandiro eisevenzi yako kubva pakutanga chaipo.
Inoshanda uye inonakidza dhizaini, inogara ichitsigira nekuvandudza, isina bhurukwa yekubatanidza ma plugins uye APIs, kuzivikanwa kwe cms mhinduro - zvese izvi zvichaitwa naSemalt.
Webhusaiti SEO kukurudzira
Padanho rekutanga rebasa pawebhu saiti optimization, iwe ungangoda rutsigiro rwevanyanzvi vane ruzivo. Isu tinoshandisa hunyanzvi hwedu, hwakawanikwa pamusoro pemakore ekushanda maitiro, kuti tikutungamirire mukusimudzirwa kwenzvimbo yako. Iyo yakazara yakazara yemasevhisi ekuongorora iyo yazvino webhu zviratidzo uye internet maitiro, kutarisa kumatambudziko uye kugadzirisa, kugadzira uye kugadzirisa webhusaiti ndizvo chaizvo zvaunoda uye zvauchawana kubva kwatiri.
Zvakanakira basa redu:
Chikwata chevanyanzvi vane tarenda chakagadzirira kudyidzana kwemaawa makumi maviri nemaviri pazuva, mazuva makumi mana nemashanu nemazana mana pagore. Vashandi vedu vane gumi nevazhinji vanokwanisa nyanzvi dzinotaura Chirungu, chiGerman, chiFrench, Spanish, neTurkey. Nekudaro kubata vabati-vanyori, mapurogiramu, vagadziri vezvinyorwa, vagadziri vesaiti kana kunyange hutungamiri hwekambani, unogona kuve nechokwadi chekuti iwe unonzwisisika uye unokwanisa kubhangi pane zano pane chero nyaya;
Kweanodarika makore gumi, timu yedu yepedyo-yakaungana kubva kune vane tarenda, vano shingairira, uye vanokurudzira nyanzvi dzaita chirongwa chakawanda chakabudirira. Makore ekuenderera mberi kwekudzidzira uye kuunganidzwa kweruzivo kwakabvumira nyanzvi dzedu kupombi hunyanzvi uye kuvandudza yakasarudzika nzira ye network sosi yekushandisa.
Anopfuura 800,000 mapurojekiti akabudirira, uye zviuru mazana matatu vashandisi vanogutswa nemhando yebasa redu;
Iyo gallery yemapurojekiti akapedzwa chiratidzo chebudiriro yaSemalt mukushandisa ayo mazano, uye kuongororwa kwevatengi vakagutsikana kunosimbisa kushanda kwemasisitimu.
Flexible system yezvidimbu uye inowanzotaridzika inopa; yakanakisa mhando-mutengo mwero. Iwe wakasununguka kusarudza yako yaunofarira mabasa iwe pachako zvichienderana nemari yako wega uye chinangwa chinotariswa. Isu tinopa hurongwa hwakaringana hwezvidimbu uye zvakanakira zvinopa kune vatengi venguva dzose. Kwemadhora 0.99 chete, iwe unogona kuedza yedu-vhiki mbiri AutoSeo Muedzo uye ona kuti ndeapi maficha anonyanya kukufadza. Mune ino kesi, zvisinei kuti iwe unosarudza AutoSeo, FullSEO kana Analytics, mwedzi mitatu, mwedzi mitanhatu, uye gore rimwe nerimwe mapakeji anounza iwe unobatsira gumi, gumi nemashanu, uye makumi maviri neshanu muzana, zvichiteerana.
Icho chikonzero chekushanyira webhusaiti yedu
Pane yedu saiti, iwe unogona kuzvijaira iwe pachako nheyo dzeSemalt uye kuongorora kwevatengi kuitira kuti unzwisise kwete chete izvo zveSEO asiwo maitiro e webhusaiti yedu webhusaiti zvinoreva. Iwe unogona zvakare kuwana ruzivo rwese rwakakosha nezve masevhisi akapihwa uye mutengo wavo pane ye Semalt yepamutemo webhusaiti. Kana chero musoro wenyaya ukaramba usina kugadziriswa iwe, bvunza mubvunzo kune yedu timu yekutsigira.